Kaamirooyinka xawaaraha ku jira Khariidadaha Apple waxay gaarayaan dalal badan | Waxaan ka socdaa mac
Dhamaanteen waan ognahay inay gabi ahaanba sharci u tahay biraawsarka aan ku dhex darno gaarigeena si uu noogu muujiyo radaarrada go'an Uguyaraan kuwa DGT ay noo ogolaaneyso inaan ogaano goobta gaarka ah. Wax kale oo aad u kala duwan ayaa ah qalabka wax sheega oo kaaga digaya raadaarka "qarsoon". Taasi waxay leedahay ciqaab taraafikada haddii aad isticmaasho.
Markaa ma jiraan wax caqabad ku ah naakhudeena GPS si uu nooga digo radaarrada "dadweynaha". Khariidadaha Apple Muddo bilooyin ah ayay ka calaamadeyneysay dalalka qaar, haddana waxay umuuqataa inay ku sii faafineyso meelo badan Waxay noqon kartaa in ugu dhakhsaha badan, waxay noqon doontaa annaguba sidoo kale.
Badanaa badmaaxayaasha GPS ee ku dara gawaarida waqtigan xaadirka ah waxay kugu wargelinayaan shucaacyada go'an ee liiska daabacaya DGT oo leh mowqifkeeda la taaban karo. Gabi ahaanba waa sharci. Haddii aadan haysan suurtagalnimadan, waxaad had iyo jeer ku qaadan kartaa iPhone-kaaga ku xiran mid ka mid ah badmaaxayaal badan oo GPS ah oo raadaarku ku calaamadeeyo.
Haddii aad ku nooshahay Mareykanka, Kanada, Ireland, iyo Boqortooyada Midowday, hadda waxaad ka furan kartaa khariidadaha Apple-kaaga CarPlay gaariga ama kanaga iPhone, oo arag meesha ay ku yaalaan kaamirooyinka xawaaraha go'an ee waaxda taraafikada ee waddan kasta ay u aragto inay yihiin "kamaradaha xawaaraha dadweynaha" waxayna daabacaan goobta saxda ah.
Netherlands, Austria iyo Australia
Blog Dutch Tech ah Dhaqanka la daabacay maanta in Khariidadaha Apple ay hadda muujinayaan macluumaadka kamaradaha xawaaraha ugu yaraan meelaha qaarkood ee Holland, taas oo soo jeedinaysa in Apple ay ku guda jirto soo saarista muuqaal noocaas ah dalal badan.
Isticmaalayaal badan oo Austria y Australia, ayaa soo sheegaya in Khariidadaha Apple ay sidoo kale muujinayaan meesha ay yaalliin shucaaca xakamaynta xawaaraha ee dalalkooda. Iyada oo ay u fududahay in lagu hirgeliyo goobahan biraawsar, maaddaama ciidanka taraafikada rasmiga ah ee waddan kasta uu ku siinayo liistada isku-duwayaasha GPS ee raadaar kasta, layaab ma leh in liiska waddamada ku siinaya shaqadan lagu daro Apple. Khariidadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Radarsada khariidadaha Apple waxay gaarayaan dalal badan